2 Oktobha we-2000 ukuya ku-5 Oktobha 2000
Ingxaki ezikhoyo, imicimbi nemiqobo
Ezi ngxaki zilandelayo zezona zaqatshelwayo ziingcali zemfundo.
Iingcali zemfundozbafumana ingxaki kubuchule bokubhala nokufunda, ingakumbi ukungathalelwa ngqalelo kokufunda iincwadi nokunqaba kwesiphiwo sokuyila ngenxa yokufundiswa kwabantwana ngolwimi olungelo lwimi lwabo lweenkobe, ingakumbi kwimfudo ephambi kwaleyo yaseyunivesithi. Abazali ngabona bagqiba ngolwimi omalusetyenziswe ngabantwana kodwa amathuba amaninzi abazi nto ngemicimbi enokwenza nokusetyenziswa kolwimi lwesibini ngaphezu kwelo lweenkobe nempembelelo zoko kwizemfundo. Oku kwenziwa kukujongelwa phantsi keelwimi zesiNtu nokungakwazi ukumelana neelwimi zabanye abantu.
Ingxaki yesibini eya qatshelwa ngabasebenza ngolwimi kukunqongophala koqeqesho nophuhliso lwabasebenza ngentetho yeelwimi ezininzi. Kuyaqapheleka ukunqongophala kootitshala abanobuchule kwisakhono esithile. Otitshala abangaqeqeshelwanga ukufundisa kumagumbi anabantwana abathetha iilwimi ezininzi bafumana ubunzima bokufundisa kula magumbi agcweleyo.Ukukhetha ukusebenzisa ulwimi olunye kwetitshala kwenza ukuba kube nzima ukuhlangabezana nokwahluka kweelwimi kumagumbi okufundisa. Ngamanye amaxesha oku kuqhawula unxibelelwano nangakumbi. Nangona kunjalo, ootitshala bazifumana bengenamisebenzi ngenxa yokunqaba kwemisebenzi.
Imibhalo kwiindawo ezisingqongileyo ibhalwa ngesiNgesi okanye ngesiBhulu. Ukuncedwa kwabantu ngeelwimi zabo kuyingxaki. Umzekelo, abantu bathetha olunye ulwimi baze balawulwe ngolunye ulwimi. Ukongeza koku, iimpawu ezalatha indlela, amagama eendawo nawezitalato ezibhalwe ngolwimi olunye azamkelekanga njengoko zingabonisi ubukho bezinye iilwimi.
Le ngxaki ibonakala ngakumbi xa kushicilelwa izinto. Kukho unqophalo lwamaxwebhu, oovimba, izixhobo zokufundisa, isigama esitsha, kwiilwimi zesiNtu xa kuthelekiswa nezininzi zesiNgesi.
Ukungasetyenziswa ngendlela kolwimi nomgangatho ophantsi weenguqulelo zolwimi kukhokelela ekutolikweni kakubi kwezinto. Imfundo ezilokishini ayinakulinganiswa naleyo yezikolo ezazisaya kuba zezabelungu nezabantu bebala. Ngaphezu koko abafundi bohlwayelwa ukungafumani amanqaku athile kulwimi lwesibini. Esi sesinye sezizathu ezibangela ukuba batshone kakhulu abantwana. Iziphumo zematriki zikubonalisa ngokucacileyo oku.
Yingxaki ukuba inqanaba lemfundo lijongwa ngolwimi olunye, olusisiNgesi. Oku kukhethwa kwesiNgesi njengesilawula yonke into kuxhalabisa abantu. Kwinqanaba lemfundo esemva kweyematriki, kuya kunqaba inkuthazo yokuphuhliswa kweelwimi zesiNtu. Akwenziwa mahluko phakathi kolwimi lokuqala nolwimi lwesibini, oku kubonisa ukunqongophala komgaqo-nkqubo kumaziko emfudo ephakamileyo. Uwiso-mthetho alwenzwelwa ukuqinisekisa ukulingana kweelwimi.
Iingcali zolwimi zizoba lo mfanekiso wokunqwenelekayo kwimfundo:
Banqwenela ukuba intetho yeelwimi ezininzi ibenolawulo olumandla kuqoqosho,
Umnqweno wabo kukusetyenziswa kolwimi njengesixhobo sokuhlanganisa abantu, ukubadalela amathuba nokuphuhlisa intsebenziswano ngeelwimi endaweni yokuyokuxambulisana. Bonke abemi kufanele bakwazi ukufunda nokubhala ngeelwimi ezintathu.
Ukusetyenziswa kobuncinane beelwimi ezimbini kulo lonke ulawulo lukarhulumente. Oku kwenza ukuba kubeyimfuneko ukuncedisa urhulumente ukuba aphumeze imigaqo-nkqubo yolwimi.
Izithethi ezisebenza ngolwimi, njengeenkosi nabakwezo politiko, mabe ngumzekelo kwaye baphuhlise ukusetyenziswa kweelwimi zabo zenkobe.
Kufundiswe ngolwimi lwenkobe ukuya kutsho kwimatriki, neemviwo zibhalwe ngeelwimi ezintathu. Abafundi babhale ngolwimi abalukhethayo. Oku kuthetha ukuba makubekho ootitshala abakwazi ukusebenzisa iilwimi ezintathu ukwenzela ukuba bakwazi ukuhlangabezana neemfuno ezahlukileyo zabantwana kuwo onke amanqanaba, nokufundisa izifundo ngeelwimi ezininzi. Mabaxhaswe ngabazali abanolwazi nabakhathalayo (ngokubhekisele kokunokuxhanyulwa kwintetho yeelwimi ezininzi), babenabazali nezikolo ezisebenzisanayo. Abasebenza kwimfundo babona ukuba kwixesha elizayo kunokubakho ulwazi lokuthetha nokubhala ulwimi lwenkobe nolunye ngokwanelisayo, oku kunokukhokhelela ekuphucukeni kwemfundo ezilokishini
Kufuneka imibhalo engeeelwimi ezininzi kwiindawo ezisingqongileyo, nokubhalwa kweencwadi zokufunda nabanye oovimba beelwimi zesiNtu, kubekho amathala eencwadi kuzo zonke iindawo zoluntu ngazo zonke iilwimi. Makushicilelwe oovimba bokufundisa, iincwadi, amaphephandaba, njalo njalo ngeelwimi zesiNtu kunye noluhlu lwesigama ngeelwimi ezininzi olungolwimi oluntsonkothileyo. Oku kuthetha ukuphuhliswa kolwazi lwezoqoqso, ezopolitiko nezoluntu kulwimi lwenkobe.
Iingcali zemfundo zinqwenela ukuba kwenziwe uguqulelo lolwimi noshicilelo lwawo onke amaxwebhu aseburhulumenteni, iincwadi zemfundo nezokufunda namabali emveli (ngoncedo lwabaguquleli bolwimi abaqeqeshiweyo) kuzo zoke iilwimi zaseMzantsi Afrika, oku kuya kukhokelela kulwamkelo lweelwimi zenkobe kwezemfundo nakwezoqoqosho.
Ukuqhelanisa abantu nokufunda iincwadi kwiilwimi ebezingathathelwa ngqalelo ngaphambili.
Ngokufunda iilwimi nokuvelana namanye amaqela, kuya kube kuqalwa umthetho wokuhlonelwa kwenkcubeko neelwimi ezahlukeneyo, okuya kulinganisa wonke ubani neelwimi zabo. Ngokufutshane, abanika igalelo kweli lizwe baya kwenza njalo ngobuchule babo bokuyila, bakwazi ukukhuphisana ngokuzithemba, oku kuya kubanika amathuba alinganayo.
IINDLELA ZOBUCHULE EZINOKUQATSHELWA
Iingcali zemfundo zaphakamisa ukuba ootitshala mabavalelwe kwigumbi lokufundela elinabantu abathetha ulwimi abangaluvayo kangangeveki. Banganikwa noonomyayi abo!
Bagxininisa imfuneko yokuphuhlisa ulwazi ngolwimi nokususa ibala kwimfundo yokufundisa ngolwimi lwenkobe. Oku kungenziwa ngokuba kwamkelwe iilwimi zesiNtu njengeelwimi ezinokusetyenziswa, ngokuyeka ukujonga isiXhosa njengolwimi olusetyenziswa ngeemini zokubhiyozela inkcubeko nemixhentso ebizwa ngokuba yeyegambhutsi. Endaweni yoko kwenziwe iinkqubo zokutshintshisana ngenkcubeko nokwazisa iilwimi kwiindawo ezinika imisebenzi.
Kufuneka kuqale kunikwe amathuba iilwimi zaseAfrika. Baphakamisa indlela ekunokongezwa ngayo ezinye iilwimi ngokwemiqathango. Iilwimi ezongezwayo maziphuhliswe zide zifikelele kumanqanaba aphezulu(kodwa zingakhuphisani). Kungasetyenziswa abantu abanomdla abangazi kufuna ntlawulo ukuba baphuhlise intetho yeelwimi ezininzi.
Zaphakamisa ukuba izikolo zibe namanani amancinci kumagumbi okufunda kukhuthazwe intando yokufunda ezikolweni nasemakhaya. Izikolo mazinyanzelise ukuba kufundwe ngolwimi lwenkobe, ziqalise nokunika abafundi iimviwo ngolwimi lwabo. Izikolo zingaphucula iindlela zokufundisa ukuba zibandakanye uncwadi nokufundwa kwamabali ngabo bonke abafundi. Kungaphuculwa uqeqesho lokufundisa iilwimi ukuba lube lolo lubandakanya abafundi.
Makwenziwe amalungiselelo emfundo yabantwana abancinci(isicwangciso sokuphumeza sikhawuleziselwe abantwana abaminyaka 0-6). Iiyunivesithi, iiteknikoni nezikolo mazithathele ingqalelo imvelaphi yenkcubeko yomfundi ngamnye. Makubekho imfundo ephakamileyo engeelwimi zonke zaseMzantsi Afrika, nophando olungeelwimi ezintathu malukhuthazwe. Ushicilelo lweencwadi ezisetyenziselwa ukuxhasa imfudo malube ngeelwimi ezintathu.
Zaphakamisa ukuba makwenziwe ubumbo ngokutsha olungqingqwa loqeqesho nophuhliso lootitshala, oku makubandakanye ukuqeqeshwa ngokutsha nokutshintshwa kwendlela ekusetyenzwa ngayo kwezemfundo. Makugxininiswe ukwazi ukufunda nokubhala ulwimi ukuze umntu aphumelele uqeqesho. Kwaphakanyiswa nokuba ootitshala abambalwa mabakhutshwe emisebenzini yabo kangangenyanga ezintathu baze baqheliswe ulwimi abalusebenzisayo. Okanye, uphuhliso nokusasazwa kweengcungela ukuba ziqeqeshe abaqeqeshi. Kuqeqeshwe abafundi abathetha iilwimi ezininzi ukuba bakhuthaze iinkqubo zokuqeqsha ootitshala. Kweziwe ukwamkelwa kweenkcubeko ezahlukileyo kube ngundoqo woqeqesho lootitshala.
Kwaphakanyiswa ukuba iikompyutha mazilungiselelwe ukuba zikwazi ukusebenziseka ngeelwimi ezintathu. Makubekho unxibelelwano nezoshishino ukukhuthaza ukuba zisebenzise iilwimi ezintathu. Ukudalwa kwemisebenzi ngokukhuthaza iinguqulelo zolwimi, izikolo zenguqulelo zolwimi mazidlale indima enkulu. Kufuneka kwenziwe imali yokuthenga iincwadi neyophuhlisa amathala eencwadi. Umzekelo: ukusebenzisa imali yeLotto okanye ukutsalwa kwerhafu yokukhulisa intetho yeelwimi ezininzi.
Kukhankaselwe ukuphunyezwa kwemigaqo-nkqubo. Abakwezo politiko mababe ngumzekelo, mabahlonele kwaye baqonde imicimbi ekuthethwa ngayo ngabantu. Makukhuthazwe ukunikwa kwezifundo zolwimi koonomathotholo nakoomabonakude, ngokunika usasazo lweendaba inkuthazo. Iingcali zemfundo ziphakamisa ukuba makusetyenziswe intetho yeelwimi ezintathu /yeelwimi ezininzi njengemfuneko xa umntu efuna ukungena kwezoplitiko, nokuba kubekho isohlwayo sokusebenzisa ulwimi olunye. Makuqatshelwe ulwazi lwentetho yeelwimi ezininzi kumathuba emisebenzi naxa kunyuselwa abantu.
Kwaphakanyiswa uyilo lweenkqubo ezibandakanya iinkcubeko ezahlukileyo zolutsha, njengeemini zokubhiyozela inkcubeko yamaXhosa /yamaBhulu/yamaNgesi. Ukukhuthazwa kwezinto ezizezemveli yase-Afrika kwimfundo neenkqubo zoqeqesho lolwimi ezibandakanya iinkcubeko ezahlukileyo. IKomiti yeeLwimi mayiququzelele iintlanganiso nephulo lokwazisa nokufundisa abazali, ootitshala norhulumente ngemibandela yolwimi. Kugxininiswa kukubaluleka kokubandakanywa kwabazali xa kuthathwa izigqibo ezingotshintsho. Makuzanywe ukuphuhlisa iinkqubo ezibandakanya abazali kutshintsho lwezikolo nokwazisa abazali ngemigaqo-nkqubo engolwimi lwabo. Imfundo iqala ekhaya. Nokuba bangazilahlela kangakanani, kuyafuneka ukuba abazali bathathe inxaxheba.
Abasebenza ngolwimi bagxininisa ukubaluleka kokuba kujongwe iinjongo ezinokufezekiseka.
Mazingajongelwa phantsi izikolo zaselokishini ngabafundi abavela kwizikolo zabucala nezikolo ezazisaya kuba zezabelungu. Oku kungenziwa ngokuba kuqatshelwe zonke iingxaki ezithoba umgangatho wezi zikolo.